Shiinaha 75% Alkoosha jeermiska dila warshadda IBC / Drum iyo soosaarayaasha | Zhongrong
Saamaynta covid-19, 75% jeermiska dila aalkolada ayaa noqda baahida daryeelkeena shaqsiyeed ee nolosheena maalinlaha ah qaasatan meelaha dadweynaha sida iskool, isbitaal, supermarket, huteel, iwm. jeermiska si loo ilaaliyo caafimaadkeena si wax ku ool ah.
Tiknoolajiyada ethanol ee hormarinta Shiinaha muddo ka badan 20 sano
Saamaynta covid-19, 75% jeermiska dila aalkolada ayaa noqda baahida daryeelkeena shaqsiyeed ee nolosheena maalinlaha ah qaasatan meelaha dadweynaha sida iskool, isbitaal, supermarket, huteel, iwm. jeermiska si loo ilaaliyo caafimaadkeena si wax ku ool ah. Xirmada Drum / IBC waa mid dhaqaale badan, oo leh mug weyn, iyo celceliska qiimaha ka hooseeya baakadaha kale ee yaryar, waxaad ku buuxin kartaa baakadka yar yar oo waad isticmaali kartaa. Markaan soo saarno aalkolo alaabta ceyriinka ah, qiimaheena wuxuu noqon doonaa mid tartan badan oo tayo sare leh. Ka sokow, waxaan ka gudubnay CE, FDA, iyo xaqiijinta ISO. Waxaan bilownay summadFarsamada-BIO in laga dhigo sumadda 1aad ee alaabada jeermiska lagu dilo ee Shiinaha maadaama aan haysano tayada ugu wanaagsan ee khamriga Shiinaha. Waxaan hogaamineynaa Shiinaha dhanka tikniyoolajiyadda ethanol. Waxaan haynaa qiyaastii 500,000 mitir laba jibaaran oo aqoon isweydaarsi ku yaal gobolka Hebei, Shiinaha. Shirkadeena waxaa la aas aasay sanadkii 1999. Sikastaba, waxaan sidoo kale aqbali karnaa OEM & ODM dhamaan noocyada kala duwan ee jeermiska dila aalkolada. Rajeynaya inaad noqoto lammaanahaaga caalamiga ah oo aad buuxiso xaalad guuleysi ah!
Faa'iidooyinka: Ku saleysan aalkolada · Degaan ahaan Badbaado · Triclosan Waa Bilaash ·
Use: Si loo caawiyo baabi'inta bakteeriyada maqaarka ama dusha walxaha.
Jihada: Si fudud u saar gacmaha, maqaarka dhawrsan ama dusha sare ee walxaha guud, kuna hay ilaa 1-3 daqiiqo.
Digniinta: Isticmaalka dibedda oo keliya · Guban kara · Ka fogow kuleylka iyo ololka meel ay carruurtu gaarto ∙ Ka fogow taabashada wejiga, indhaha iyo maqaarka jaban.
Waxyaabaha aan firfircooneyn: Biyaha Nadiifsan
Macluumaad Kale: Waxaa lagu keydiyaa meel qabow oo qalalan oo xiran.
Waa maxay “caadi ah” waxyaalaha miyuu fayoobaaniyaa? Ma dili doonaa koronta?
Waad ku mahadsan tahay su'aasha weyn! Waxaan si buuxda u fahmaynaa sababta aad su'aashan u weydiineyso. Waxaa muhiim ah in la ogaado in FDA aysan hadda ansixin wax daawo ah, oo ay ku jiraan gacmo nadiifiyaha, si looga hortago ama loo daaweeyo covid-19. Waxaan qaadeynaa mas'uuliyadeena si aan u hubino in macaamiisha ay u socdaan ilaha saxda ah ee macluumaadka noocan ah, khubarada Shiinaha qaarkood waxay horey u cadeeyeen in 75% Alcohol ay gali karto daboolka covid-19 ayna xoojisay borotiinkiisa si ay u nooleyso
Waad ku mahadsantahay inaad gaartid TECH-BIO 75% Jeermiska Khamriga! Isku day inaad fartaada hoos ugu riixdid mashiinka, bamku waa inuu markaa soo ifbahaa.
Maxaa ku saabsan xirmada?
Waxaan ka dhigi karnaa 200L durbaan ama 1000L IBC xirmo ballaaran oo loogu talagalay 75% Khamriga, waxay ku habboonaan lahayd qaar ka mid ah kuwa wax iibsada si ay uga dhigaan xirmooyin yaryar.
Xiga: 50ml 75% Qamriga Jeermiska Alkolada TECH-BIO